In badan oo naga mid ah ku kaydi files badan casriga ah, waxaanan ku kaydiso sida badan haddii aan ka badan oo ku saabsan kombuyuutarrada. Oo haddii aad tahay qof wax aniga oo kale, oo aad ka heli naftaada si joogto ah u baahan si ay u wadaagaan files u dhexeeya qalabka la qaadi karo ama in oo ka PC. Nasiib wanaag, haddii aad tahay qof user ah Android, in ay hawl aad u fudud. Waxaad mar walba laaban karaan in ay ka siib jirka ah ee habkan telefoonka aad iyo wadaagaan files jidkaas. Si kastaba ha ahaatee Google ayaa habkan dhawaan bedelay. Android hadda isticmaalaa hab maamuuska kala duwan oo ay ka dhigan tahay in aad computer laga yaabaa in aan si dhakhso ah qalab aad sida drive kaydinta ah. Sidaas daraadeed waxaad u baahan doontaa in aad bedesho ah goobaha yar ee aad taleefan, taas oo ah mid aad looga xumaado. Intaas waxaa sii dheer, ma aha mar dambe 2007 iyo deeruhu qalab aad in ay u gudbiyaan files waa dugsi jir. Waxaa laga daadiyo badan oo loo isticmaali karo si ay u gudbiyaan files u dhexeeya qalabka aad wirelessly oo aan dabooli doonaa 10 ka mid ah kuwa ugu fiican.
3. dir meel
8. Transfer File Fast
Transfer File 10. Bluetooth
SuperBeam waa android app ah kala iibsiga file xooggan kuu ogolaanaya inaad si ay u sameeyaan Wi-Fi xiriir toos ah oo u dhexeeya qalabka. Wi-Fi toos marayaa helaan Wi-Fi dhibcaha ay xiriir, taasoo la micno ah laba qalab si toos ah midba midka kale wirelessly xiri karto, taasoo keentay in la iibiyo si dhakhso ah. Fursadaha qaybsiga ayaa waxaa ka mid ah files & fayl, music, sawiro, videos, barnaamijyadooda, waraaqaha iyo haddii aad leedahay xiriir SuperBeam plugin lagu rakibay, waxa kale oo aad la wadaagi karto xiriirada aad. Malaha muujinta coolest ee app waa in loo isticmaalo si QR hab fiican scan si xogta oo dhan waa la ilaaliyey. App Tani waa lacag la'aan, iyadoo $ 2 pro version.
AirDroid waa app kala iibsiga file a free android waxaad ka heli kartaa dukaanka Play kuu ogolaanaya inaad si ay u gudbiyaan files oo ka your computer xakameeyo telefoonka smart gudaha biraawsarkaaga web ah. Waxaad isticmaali kartaa browser web kasta, kombiyuutar kasta ama aalad in uu yahay habka hardware iyo operating Alla. Wax kasta oo uu leeyahay browser a full web samayn doonaa. Si fudud u furo codsiga ilaa aad telefoon iyo raac tilmaamaha. Waxay ku siin doontaa cinwaanka gaar ah IP in aad soo gashid waa bar cinwaanka internetka qalab kale oo ay sidoo kale ku siin doono ereyga sirta ah si aad ka gali kartaa. Tani waa xiriir aamin ah iyo inta aad sii password in gaar loo leeyahay dooro https, waa in aad si ammaan ah. Marka aad login, inaad isla markiiba ka arki kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka. Waxaad ka heli-waqtiga dhabta ah stats ah ee aad taleefan sida nolosha batteriga iyo kaydinta iyo waxa kale oo aad ka arki kartaa waxa ku saabsan qalabka, sawiro, music, filimada. Waxaad heli kartaa dhammaan macluumaadka si toos ah uga browser internetka. Waxa kale oo aad ku dari kartaa ama tirto faylasha ka telefoonka, rakibi codsiyada cusub, tirtirto codsiyada, qaado Screenshot iyo wax kasta oo badan.
Dhammaan barnaamijyadooda u soo bandhigay halkan, meel dir uu leeyahay user interface fudud. Waxaa ka amni badan tahay File Transfer Protocol caadiga ah sida ma jiraan wax server-saddexaad ee ku lug leh xiriir. Waxa uu isticmaalaa lix god ah oo code QR ah ammaanka ku daray. Waxa aanu bixin xawaare kala iibsiga ugu dhaqsiyaha badan, laakiin waxa uu helo shaqo lagu sameeyey.
Ma doonaysaa habka ugu fudud si ay u gudbiyaan faylasha aad ka telefoonka aad Android inay qalab kale oo wax? Isticmaal SHAREit! Waxaa ka shaqeeya weyn ku dhufto karoos ah oo uu leeyahay waafaqsan aad u sarreeya qalab Samsung. Haddii aad leedahay telefoonka ku amraya qolka, aad si fudud u bilaabi kartaa iibsiga iyo illoobin ku saabsan. Ma aha in aad ka walwasho ku saabsan wax kasta. Tan ugu wanaagsan ee Samsung app kala iibsiga kaliya waddaa ee asalka ah iyo mar la dhameeyo, aad u wanaagsan si ay u tagaan.
Mid ka mid ah fursadaha premium in aan la isticmaalayo muddo dheer waxaa loo yaqaan Wi-Fi File Explorer. Asal ahaan waa uun sahamisa file aad telefoonka ee web browser ah sida mid AirDroid dalabyo laakiin tani mid yar oo dheeraad ah lafaha u dhashay oo si toos ah u barta. Waxaan u doortay files wareejinta sida AirDroid waa yar oo dheeraad ah loo xakameeyo wax walba. Haddii aan u baahanahay si ay u gudbiyaan file hal, sida caadiga ah waxaan kiciyo oo Wi-Fi file sahamisa. Marka ugu horraysa ee aad furto Wi-Fi file sahamisa, sida AirDroid idinku siin doonaa cinwaanka IP u gaar ah. Dul in isticmaalka internetka your computer ee. Dooro files in aad sidoo kale doonayaa inaan download ama geliyaan oo sug kala iibsiga si uu u dhameystiro.
Xender waa app ka mid ah in diiradda inta badan xawaaraha. Waxa ugu wanaagsan ee suuqa kala iibsiga waaweyn waa sida filimada maadaama ay xawaare kala iibsiga oo ka badan 4MB / s. Mid ka mid ah dhibaato la app, inkastoo ay tahay in antiviruses qaar ka mid ah waxaa lagu ogaan karaa sida furin. Sidaas, waxaa suuro gal ah in aad macluumaad xasaasi ah uu xaday.
Habka isku dayay iyo run in aan la isticmaalayo wax badan ka sii dheer tahay mid ka mid ah hababka kale waxaa loo yaqaan DropBox. Waa wax ku cusub iyo qaar badan oo idinka mid ah ay u badan tahay mar hore u isticmaali ama ogaado waxa ay tahay. Asal ahaan waa adeeg kaydinta daruur kuu ogolaanaya inaad ku kaydiso faylasha aad fog iyo ku helaan iyaga oo ka badan qalab kasta oo aad leedahay waxaa laga yaabaa. Waxaad ku rakiban kartaa WordPress on your computer ama mid ka mid ah aaladaha aad mobile iyo files u hagaagsan u dhaxeeya. Waa macno sida ugu fudud ee jiiday iyo tagtey file ah oo wuxuu galay folder DropBox ku on your computer ama si fudud doorashada file a in ay geliyaan in WordPress ka telefoonka. Marka gool Upload ah, file waa la heli karo oo ku saabsan mid ka mid ah DropBox qalab awood aad. Dhibaatada ay leedahay WordPress si kastaba ha ahaatee waa in kala iibsiga waa wax yar oo gaabis ah. Sababta Wi-Fi File Explorer waa wax yar oo dhakhso badan oo ka fiican yahay sababtoo ah waa xiriir toos ah oo aad network Wi-Fi deegaanka. WordPress in server fog soo diro file ah oo ka dibna waxay leeyihiin in aad u soo dejisan. Waxaa jira xoogaa tallaabooyin ah ee asalka ah in hoos u dhigi habkan laakiin waa weyn haddii aad u baahan tahay mid ka mid file ku saabsan qalabka kala duwan.
Sida ay magaca uu tusinayaa, Transfer File Fast kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan faylasha aad xawaare hillaaca oo sahal ah. Sida SuperBeam, waxa kale oo isticmaala Wi-Fi Direct, taas oo ay ka mid tahay doorashooyinka ugu wanaagsan ee wareejinta files waaweyn ka dhigaa. Waxaa ka shaqeeya gaar ahaan si fiican marka wareejinta macluumaadka u dhexeeya qalabka Samsung. Sidoo kale, tani Samsung app kala iibsiga taageertaa kala duwan oo badan oo ah warbaahinta, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, music iyo qaar badan.
By samaynta isticmaalka Wi-Fi technology Direct, HitcherNet u ogolaanaya kala iibsiga si deg-deg iyo waxa wanaagsan in aadan u leeyihiin in ay ku tiirsan yihiin router ama isku xirnaanta internet. Waa app ah in si degdeg ah helo caan sababtoo ah xawaaraha ay si dhakhso ah laakiin dadka isticmaala qaar ka mid ah ayaa lagu ogaaday in kala iibsiga file waa mararka gooyey iyo in la billaabeen.
Transfer File Bluetooth isticmaalaa Profile File Transfer (FTP) iyo Riix ob_x_ject Profile (OPP) in laguu ogolaado in aad si ay u maareeyaan iyo sahamin qalab kasta waa Bluetooth socon. App waxa uu leeyahay muuqaalada xiiso leh garoomo dhowr ah, laakiin mid ka mid ah dhibaatada ugu weyn waa in wareejinta waa mid gaabis ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ay hubisaa in aysan jirin dillaac macluumaadkaaga shakhsiyeed sida qalabka keliya ee la xariiri karaan midba midka kale.
> Resource > Top List > Top 10 Android Apps File Transfer inay isku bedelasho Android Files